केटीहरूलाई 'सहज बनाउने' उपहार :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
केटीहरूलाई 'सहज बनाउने' उपहार
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, साउन १७
श्रीमती, दिदीबहिनी, छोरी वा केटी साथीको जन्मोत्सवमा तपाईं के उपहार दिनुहुन्छ?
सामान्यतया फूलका गुच्छा, सजावट वा श्रृंगारका सामान वा लुगाफाटा तपाईंको रोजाइमा पर्लान्।
यीभन्दा नौलो र उपयोगी केही दिने सोचमा हुनुहुन्छ भने विकल्प छ- 'द शी थिङ'।
द शी थिङ- अर्थात् महिलाका कुरा।
महिनावारी बेलामा चाहिने स्यानिटरी प्याड, रुमाल, पेन्टी लाइनर (पातलो र सानो प्याड), क्र्याम्प प्याच (दुखाइ कम गर्न पेटमा टाँसिने), ग्लिसिरिन, चकलेट, चिया (टी ब्याग), लोसन, फेस मास्क लगायत सामानहरू भएको 'गिफ्ट बक्स।'
हाम्रो समाज जहाँ महिनावारी अझै वर्जित नै छ, लाजको कुरा मानिन्छ र प्याड लुकाइन्छ, त्यहाँ यस्तो उपहार!
'द शी थिङ' को उद्देश्य यही पुरातन सोच परिवर्तन गर्ने हो।
द शी थिङ कुनै पसल होइन। यो एउटा समूह हो जसले आफ्ना सदस्यहरूलाई महिनावारीका समयमा चाहिने सबै आवश्यक सामान एउटा बाकसमा प्रदान गर्छ। यसका निम्ति सामानहरूको विवरणअनुसार निश्चित रकम तिर्नुपर्छ।
यी सबै बाकस व्यवस्थापन र आपूर्ति सृष्टि पहाडी र नविना सुवेदीले गर्दै आएका छन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढिरहेका नविना र सृष्टिले पोहोरदेखि मात्रै यो काम थालेका हुन्।
सृष्टि पहाडी र नविना सुवेदी। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
'महिनावारीको अर्को नाम नै 'द शी थिङ' हो,' नविना भन्छिन्, 'यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर लाजको रुपमा हेरिन्छ। हाम्रो उद्देश्य यो सोच बदल्नु हो।'
भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दै गरेका सृष्टि र नविनाले कहिल्यै व्यवसायी बन्ने सोचेका थिएनन्। समयले उनीहरूलाई नेपाल आएर व्यवसायीका रूपमा स्थापित गरायो।
'भारतमा पढ्दा तीन वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्थ्यो,' सृष्टिले भनिन्, 'त्यसको लागि कर्पोरेट अफिसमा काम थाल्यौं। केही समयपछि, एउटै कुर्सीमा दिनभर बसेर काम गर्न सक्दैनौं भन्ने महशुस भयो।'
आफ्नो रूचि यस्तो अफिसमा नभएको थाहा पाएपछि सृष्टि र नविना दुवै नेपाल फर्किए। तर उनीहरूलाई यहाँ के गर्ने भन्ने निधो थिएन।
त्यसैक्रममा उनीहरूले राजधानी काठमाडौंमै महिनावारीका धेरै समस्या देखे।
'एक त गुणस्तरीय प्याड पाउनै गाह्रो हुनेरहेछ,' सृष्टि भन्छिन्, 'गुप्ताङ्गमा छुने भागमा प्लास्टिक राखिएका प्याडले धेरै महिलालाई छालामा समस्या आएको छ। अनि गुप्ताङ्ग सफा गर्ने स्यानिटरी न्याप्किन पनि सहजै नपाइने।'
यिनै समस्या देखेर सृष्टि र नविनाले 'द शी थिङ' सञ्चालन गरेका हुन्। बाकसका सबै सामान उनीहरूले अध्ययन र अनुभवका आधारमा राखेका हुन्।
नविनाका अनुसार महिनावारी बेला मिठो खाने इच्छा बढ्ने र दुखाइमा पनि राहत हुने भएकाले चकलेटलाई आवश्यक वस्तुको रुपमा समावेश गरिएको हो।
'महिनावारीमा महिलाको व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आउँछ,' उनले भनिन्, 'त्यस्तो बेला शरीरले मिठो कुरा माग गर्छ। नयाँ-नयाँ उपहार पाउँदा खुसी लाग्छ। त्यही भएर विभिन्न उपहार र चकलेट राखेका छौं।'
महिनावारीलाई दुःख नमानी उत्सवका रुपमा मनाउने 'द शी थिङ' को प्रमुख आशय रहेको नविना बताउँछिन्।
'द शी थिङ' विशेषगरी चार प्याकेजमा आउँछ- फोरडेज (चार दिन) बक्स, नर्मल, हेभी र रेडफेरी बक्स छन्।
रेडफेरी पहिलोपटक महिनावारी भएकाहरूका लागि लक्षित हो। यसको मूल्य २ हजार पाँच सय रूपैयाँ पर्छ।
हेभी बक्स अत्यधिक रगत बग्नेका लागि हो र एक हजार दुई सय रूपैयाँ पर्छ।
सामान्य महिनावारीका लागि नर्मल बक्स उपयुक्त हुन्छ जसको छ सय पचास रूपैयाँ पर्छ।
यी प्याकेजमा ग्राहकले तीन, छ र नौ महिनाको सदस्यता लिन सक्छन्। प्याकेजका 'थिम' हरेक महिना परिवर्तन हुन्छन्।
प्याकेजभित्र यीबाहेक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अन्य सामान पनि राखिएको छ।
'पिबड्डी' तीमध्ये एक हो। पिबड्डी भनेको महिलाहरूले उभिएरै पिसाब फेर्न मिल्ने भाँडो।
'काठमाडौंमा महिलालाई शौचालय जानुपर्दा पनि कष्ट झेल्नुपर्छ। अझ फोहोर सार्वजनिक शौचालय त स्वास्थ्यकै लागि डरको विषय हो,' सृष्टि भन्छिन्, 'त्यस्तो बेला 'पिबड्डी' ले महिलालाई पुरुषजस्तै उभिएर पिसाब गर्न सहज गराउँछ।'
उनका अनुसार यो महिनावारीको समयमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
महिनावारीमा हुने शारीरिक र मानसिक वृद्धिलाई हेर्दै सृष्टि र नविनाले 'द शी थिङ' सञ्चालन गरेका हुन्। तर सुरूका दिनमा भने यसबारे मान्छेलाई बुझाउन निकै गाह्रो भएको उनीहरूको अनुभव छ।
व्यवसाय प्रचार गर्न कलेजहरूमा गएका बेला विद्यार्थीका 'असामान्य' व्यवहार देखेको क्षण सृष्टि अझै सम्झिन्छिन्।
'हामीले पेन्टी, प्याड, न्याप्किनहरू प्रर्दशनीमा राखेका थियौं', सृष्टिले भनिन्, 'तर विद्यार्थी त प्रदशर्नी छेउछाउ नै पर्न खोजेनन्। छड्के आँखाले सामान हेर्दै हाँस्न थाले।'
ती विद्यार्थीको मानसिकता देखेर सृष्टि र नविनालाई आफ्नो व्यापार नचल्ने पो हो कि भन्ने डर भयो।
आजसम्म ‍खुलेर प्याड किन्न सक्ने अवस्था छैन, कागजमा बेरेर दिइन्छ, लुकाएरै ल्याइन्छ। यस्तो अवस्थामा महिनावारीका सामग्री उपहारका रुपमा दिन सकिने सोच विकास गर्न गाह्रो हुन्छ।
नविना र सृष्टिले सोचे- यो काम गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ला!
तर उनीहरूमा आशा त्यतिखेर पलायो, जब व्यवसाय थालेको केही दिनमै पहिलो पुरुष ग्राहक भेट्टाए।
'आफूले सोच्दै नसोचेको कुरा भएकाले व्यवसाय चलाउन हौसला मिल्यो,' नविनाले भनिन्, 'अहिले त महिलाभन्दा पुरुष बढी ग्राहक हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसबारे निकै सोधखोज गरी आफ्ना दिदिबहिनी, प्रेमिका, श्रीमती वा केटी साथीलाई उपहार दिनुहुन्छ।'
सकारात्मक परिवर्तनले भएकाले सृष्टि र नविना खुसी छन्। तर सरकारबाट यस विषयमा ध्यान नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ।
'द शी थिङ' नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको भएकाले कुनै वर्ग छुट्टाइएको छैन। नविनाका अनुसार प्याड र अन्य सामान देखेर अहिले 'कस्मेटिक' वर्गमा दर्ता छ।
योबाहेक गुणस्तरीय सामान नेपालमा उपलब्ध नहुनु सृष्टि र नविनाको मुख्य चुनौती हो।
'स–साना सामान पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ,' सृष्टिले भनिन्, 'त्यसैले सामान महँगो पनि पर्छ।'
उनीहरूले जापानबाट सामान आयात गरिरहेका छन्। यसकारण लगानी धेरै पर्ने सृष्टि र नविना बताउँछन्।
कुनै पनि प्याकेजका बारेमा सोधपुछ वा अर्डर गर्न ग्राहकले 'द शी थिङ' को सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क गर्न सक्छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १८, २०७६, ११:५३:००